Rose of Sharon: September 2012
(ဓာတ်ပုံအချို့ကို(https://www.facebook.com/pages/Myanmar-National-League/178900665539718?ref=ts)Myanmar National Leagueမှယူပါသည်)
၂၁ရက်နေ့ညမှာဟိုချီမင်းမြို့မှာနေတဲ့အစ်ကိုတစ်ယောက်ကဖုန်းဆက်တယ်… မနက်ဖြန် အမျိုးသမီးဘောလုံးဗိုလ်လုပွဲရှိတယ်… မြန်မာနဲ့ဗီယက်နမ်ကန်မှာ… သွားကြည့်ကြဘို့အဖော်စပ်တာပါ… ဘောလုံးကကန်နေတာသိပေမဲ့ ဘယ်ကွင်းမှာကန်မှန်းမသိဘူး… အခါတိုင်းက တစ်ယောက်မဟုတ်တစ်ယောက်ကဆက်သွယ်ပြီး ဘယ်နေ့ကန်မယ်…လာအားပေးပါပြောရင် လိုက်ချင်တဲ့လူတွေစုပြီး သွားကြည့်လိုက်တာ… အခုက ဘယ်သူမှလဲမဆက်သွယ်…ဘယ်မှာကန်မှန်းတောင်မသိ… ညဘက်လဲဖြစ်နေတော့မနက်ဖြန်ဘောလုံးပွဲသွားကြည့်မယ်ဆိုတာလောက်သာ နီးစပ်ရာကိုအသိပေးပြီး အိပ်ရာဝင်လိုက်ရပါတယ်…
နောက်နေ့မနက်မှ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ရုံးက ဝန်ထမ်းတွေအကူအညီနဲ့ ဘောလုံးကွင်းနေရာသိရတယ်… ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကို လက်မှတ်သွားဝယ်ဘို့လွှတ်လိုက်တာ ပြန်လာတော့ လက်မှတ်ကမရောင်းဘူး… ဖိတ်စာနဲ့ဝင်ရတာတဲ့…ကိုယ့်မှာက ဖိတ်စာမရှိတော့ အိမ်ကနေ ပတ်စပို့မိတ္တူဆွဲသွားပြီး ဟိုရောက်ရင် လုံခြုံရေးတွေနဲ့ညှိမယ်ဆိုပြီး ညနေ၆နာရီအရောက် ဘောလုံးကွင်းကိုသွားကြပါတယ်…
ဟိုရောက်တော့ VIPဝင်ပေါက်ကတာဝန်ခံတွေနဲ့စကားဝင်ပြောတာအဆင်ပြေပါတယ်… မြန်မာဘောလုံးအသင်းကတာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပေးခိုင်းတော့လဲခေါ်ပေးကြပါတယ်… ဘောလုံးအသင်းကိုလိုအပ်တာတွေကူညီပေးဘို့တာဝန်ယူထားတဲ့ ဗီယက်နမ်ကောင်လေးက ကျမတို့မြန်မာပရိသတ်အတွက် နေရာထိုင်ခင်း စီစဉ်ပေးပါတယ်…
အားပေးတဲ့မြန်မာပရိသတ်က၂၀ကျော်လောက်ရှိပါတယ်… ဟိုချီမင်းနဲ့သိပ်မဝေးတဲ့မြို့တမြို့မှာ စက်ရုံတခုကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူငယ်ချင်းက သူ့စက်ရုံက မြန်မာဝန်ထမ်းတစ်ချို့ကိုပါခေါ်လာတဲ့အပြင် ခေါင်းစည်းတွေ စတစ်ကာတွေကို အချိန်လုပြီး ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်…
ကျမတို့မြန်မာပရိသတ်ရဲ့အားပေးသံက ဗီယက်နမ်ပရိသတ်အများကြီးကြားမှာ ဟိန်းသံကိုထွက်လို့…
ပွဲစပြီးသိပ်မကြာခင် အရမ်းတော်တဲ့ နံပါတ်၆စမ်းစမ်းမော် ခေါင်းထိပြီး ၄ချက်ချုပ်ပြီး နားလိုက်ရပါတယ်… အချိန်ပိုကစားတဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာလည်း အဝါကဒ်နှစ်ခါထိသွားလို့အနီကဒ်နဲ့သန်းသန်းထွေးအထုတ်ခံခဲ့ရပြီး ၁၀ယောက်ထဲနဲ့ကစားတာတောင် ဗီယက်နမ်ကဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ဘဲ သားရေကျတာကြောင့် ပယ်နယ်တီနဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်…
မြန်မာတွေရှုံးပေမဲ့ ဗီယက်နမ်တွေကပိုတော်လို့နိုင်သွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပွဲကြည့်ပရိသတ်တွေရဲ့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပါ… မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းဟာ ပြိုင်ဘက်ရဲ့နယ်မြေမှာခြေအသာနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်စွာကစားခဲ့တာပါ….
နောက်လာမဲ့ပွဲတွေမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းရွှေတံဆိပ်ဆုဆွတ်ခူးနိုင်ပါစေလို့ ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်….
Posted by rose of sharon at 10:04 AM 14 comments: Links to this post